I-Italiya yandisa uLuhlu lweMisebenzi efuna iPasi lokuGonya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » I-Italiya yandisa uLuhlu lweMisebenzi efuna iPasi lokuGonya
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
IGreen Pass iya kunyanzeliswa kootitshala, abafundi baseyunivesithi, kunye nabantu abahamba besebenzisa izithuthi zikawonke-wonke ezide ukusuka nge-1 kaSeptemba.
IGreen Pass yase-Itali luxwebhu lwedijithali okanye iphepha elibonisa ukuba umntu ufumene idosi enye yeyeza lokugonya le-COVID, kuvavanywe ukuba akanayo, okanye ufumene intsholongwane.
Isazisi saba sisinyanzelo kwiindawo ezininzi zeshishini nakwinkcubeko ngo-Agasti 6.
Amashishini akutyeshela ukunyanzelisa umthetho unokukhokelela kwizohlwayo kubo bobabini abathengi nakwiindawo ezisuka kwi- € 400 ukuya kwi- € 1,000.
Amagosa ase-Italiya abhengeze ukuba urhulumente welizwe ulwandisile uluhlu lwemisebenzi yesiqhelo eza kuthi ngoku ifune ubungqina bokugonywa yi-COVID-19 okanye imeko ye-coronavirus engalunganga.
Ngokwabhengezo lwanamhlanje, Ipasi eluhlaza yase-Itali iya kunyanzeliswa kootitshala, abafundi baseyunivesithi, kunye nabantu abahamba ngezithuthi zikawonke-wonke ezide ukusuka nge-1 kaSeptemba.
Umphathiswa Wezempilo e-Itali, u-Roberto Speranza uthe isigqibo sokwandisa umthetho wokufaka isicelo kwizikolo nakwizithuthi zikawonke-wonke senzelwe "ukuthintela ukuvalwa nokukhusela inkululeko."
IGreen Pass yidigital okanye uxwebhu lwephepha olubonisa ukuba umntu ufumene idosi enye yeyeza lokugonya i-COVID-19, kuvavanywe ukuba akanalo, okanye uye wachacha kusulelo lwe-coronavirus, kwaye iyafana nesatifikethi sempilo esisandula ukukhutshwa yiFrance .
IGreen Pass yaba sisinyanzelo kwiindawo ezininzi zeshishini kunye neenkcubeko zase-Itali, kubandakanya iimyuziyam, amabala emidlalo, iimovie, iindawo zokuzilolonga kunye neendawo zokuhlala zangaphakathi kwimivalo nakwiindawo zokutyela, ngo-Agasti 6.
Ukungaphumeleli ukunyanzelisa umgaqo omtsha kunokubangela isohlwayo kubo bobabini abathengi nakwiindawo ezisuka kwi- € 400 ukuya kwi- € 1,000 ($ 470 ukuya kwi- $ 1,180). Amaziko awophula ngokuphindaphindiweyo umngcipheko wokuvalwa ngabasemagunyeni ukuya kwiintsuku ezili-10.
Inkulumbuso yase-Itali u-Mario Draghi uthathe amanyathelo anobukrwada ukonyusa izinga lokugonywa kwe-COVID-19 kunye nesantya kwilizwe lakhe. Ngo-Matshi, inkulumbuso yayalela ukuba i-jab yenziwe inyanzelekileyo kubo bonke abasebenzi bezempilo. Urhulumente uyihlawulisile ipasile yezempilo njengendlela yokuqhubela phambili ukunyusa amaxabiso okugonya.
I-Itali ibhalise ukusweleka okunxibelelene ne-coronavirus ngoLwesine, xa kuthelekiswa nama-27 kusuku olungaphambi kwalolo, uMphathiswa Wezempilo welizwe uxele, ngelixa inani lamatyala amatsha lenyuka laya kwi-21 ukusuka kwi-7,230. I-Italiya kunye namanye amazwe amaninzi akhombise okwahlukileyo kokudluliswa kweDelta ukuthethelela amanyathelo ayo aphikisayo olawulo.
I-S.Pellegrino Ophumelele iMbasa ye-Academy ye-Chef eNtsha Yaziswa
I-ITA Airways yenza iodolo yeenqwelomoya ezintsha ezingama-28 ze-Airbus Disemba 1, 2021
Ezi nqwelo-moya ezintsha ze-Airbus ziza kwandisa iinqwelo zokuqala ze-ITA Airways kunye nenqwelo-moya yesizukulwana esitsha esinentsebenzo engcono yokusingqongileyo, exhotyiswe ngobuchwepheshe bamva nje kunye neekhabhinethi zanamhlanje ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kakuhle okuphezulu kweenqwelo-moya kunye nentuthuzelo engcono kubahambi.